Rasaasa News – Wakiilka Ethiopia u Jooga Hargeysa, oo Tacsiyeeyay Maamulka Somaliland Dhacdadi Degaanka Gaashaamo
Wakiilka Ethiopia u Jooga Hargeysa, oo Tacsiyeeyay Maamulka Somaliland Dhacdadi Degaanka Gaashaamo
on March 21, 2012 2:06 am
Hargeysa, Mar 21, 2012 [ras] – Wararka ka imanaya xarunta maamulka Somaliland ayaa sheegaya in la geeyey Hargeysa dhaawacyo ka mid ah ciidamada ururada UBI iyo UBO oo ka qayb galay weerarkii lagu qaaday ciidanka LB ee DDSI.
Maamulka Somaliland ayaa waxaa ka soo baxaya hadalo xambaarsan colaad iyo abaabul dagaal, ka dib kolkii magaalada Hargeysa la geeyey dhaawacyo dad ka tirsan ururada mucaaradka oo ka qayb galay dagaalkii lagu qaaday ciidamada Ethiopia.
Madaxda iyo cuqaasha maamulka Somaliland ayaa si wada jir ah dawlada Ethiopia uga dalbay in ay jawaab ka bixiso dagaalkii ka dhacay gudaha dalka Ethiopia ee lagu laayey ciidamada Ethiopia.
Telefiishinka HCTV, oo laga leeyahay maamulka Somaliland ayaa soo daayey waraysi ay ka qaadeen wakiilka Ethiopia u jooga Hargeysa oo cudur daar ka siiyay maamulka Somaliland dagaalkii ka dhacay gudaha Ethiopia. Wakiilka Ethiopia ayaa yidhi “waanu baadhaynaa wixii sababay dagaalka ka dhacay gudaha Ethiopia.”
Sida uu wakiilka Ethiopia hadalka u dhigay waxaa lagu xad gudbay maamulka Somaliland, waxaana la siin doono warbixinta wixii sababay dagaalkii ka dhacay dalka Ethiopia.
Degaanka Somalida Ethiopia waxaa ka dhaca dagaalo ay sababaan ururada mucaaraka iyo isku dhaca beelaha Somalida, walina ma dhicin jawaabta ay maanta bixisay Ethiopia mid la mid ah.
Ciidamada LB ee lagu dilay Aaga gaashamo, waxay ka tirsanaayeen ciidanka Ethiopia sababta ay u dhinteena waa dirayska Ethiopia. LB dhintay waxay mudan yihiin in loo tacsiyeeyo qoysaskooda iyo qaraabadooda inta aan cid kale laga hadlin.